04 Febroary: fanokafana ny taom-pambolen-kazo Boeny | Région Boeny
04 Febroary: fanokafana ny taom-pambolen-kazo Boeny
23 février 2015 A La Une, Actualité
Mavitrika ny fandraisana anjaran’ireo tompon’andraikim-panjakana, ny mpitandro ny filaminana, ny fikambanana maro toy ny mpiaro ny tontolo iainana, ny mpivaro-kazo; ny mpiara-miombon’antoka samihafa, ny mpianatra ary ny fokonolona tamin’ny fanokafana amin’ny fomba ofisialy ny taom-pambolen-kazo 2015 ho an’ny Faritra Boeny.
Nitarika sy nanokatra ny fotoana ny Lehiben’ny Faritra Atoa Saïd Ahamad Jaffar izay nanentana ny rehetra mba hanao ho zava-dehibe ny fambolen-kazo satria ny hazo no miantoka ny fahatsaran’ny tontolo iainana izay misy antsika. Ny loza nefa hoy izy dia isika ihany no manimba ny ala amin’ny fikapàna tsy ara-drariny ny hazo ao aminy ka tokony hisy ny ezaka hamerenana izany amin’ny laoniny.
Ny Talem-paritry ny Tontolo Iainana, ny Ekôlôjia, ny Ranomasina sy ny Ala, Rtoa Rakotoarimanana Marcel Josette Evelyne dia nanamafy fa ny Malagasy iray dia mandany hazo 1m3 isan-taona, ka raha 600 000 no isan’ny mponina ato anatin’ny Faritra Boeny dia mahatratra 600 000 m3 ny hazo ripaka isan-taona kanefa ny solony tsy misy firy. Hany ka ny 10% n’ny velaran-tanin’ny Faritra Boeny sisa no mba misy ala. Noho izany dia ilaina, hoy ihany izy, ny fambolen-kazo amin’ny velaran-tany midadasika ataon’ireo sehatra tsy miankina sy ny fametrahana velaran-tany voatokana hambolen-kazo ao anatin’ny Drafitra Fanajariana ny Kaominina na ny Schéma d’Aménagement Communal.
Maherin’ny 10tapitrisa ariary ny vola lany nentina nikarakarana ity fanokafana ny taom-pambolen-kazo ity, ary zana-kazo haingam-paniry toy ny kininina sy “acacias” miisa 17 000 no natsatoka tamin’ny velaran-tany 10ha raha toa ka 25ha no tanjona amin’ity taona ity. Raha voatantana araka ny tokony ho izy mantsy ny fitrandrahana ny hazo dia ho foana ny fanimbàna ny ala honko amoron-tsiraka izay voararan’ny lalàna ankehitriny ny fakàna, ny fitanterana ary ny fampiasàna azy.